Ukufeza Uhlelo lweKhamera Yamakhamera Omzimba Namakilasi | Izixazululo ze-OMG
Ukufeza Uhlelo lweKhamera Yomzimba-Worn kanye Namakilasi
Ikhamera egqoke umzimba ibilokhu ihlala isikhashana futhi ibinokuphakama nokuhle, eminyakeni embalwa edlule. Abezomthetho ikakhulukazi amaphoyisa kuye kwadingeka ukuthi enze ucwaningo oluthe xaxa ngokuthi kusizakale kangakanani ukwenziwa kwamakhamera omzimba. Kubuye kube nesidingo sokufinyelela ngokuphelele lesi simo, sikhansele ezinye isenzo ngenkathi futhi silungisa ezinye. Inselelo enkulu ebilokhu ivela njalo mayelana nekhamera yomzimba ibilokhu iyizindaba zobumfihlo kanye nokwehluleka ukuthembela kulokho okwenziwa ngevidiyo yamuva. Kulokhu kubhala, sizoxoxa ngezinzuzo ezitholwayo zamakhamera omzimba futhi ukucubungula okuza nakho kumele kubhekwane nazo ngokushesha. Lokhu ngokuvamile kunikeza ukuncoma okuqondakala kakhulu okubonisa izindlela ezethembisayo nesifundo osifundile.
Izinzuzo zokusebenzisa ikhamera egqoke umzimba
Embuthweni wamaphoyisa lapho kusetshenziswa khona amakhamera agqokwa ngomzimba, kunezinzuzo ezithile athi amakhamera omzimba ziletha futhi lokhu kucabanga okukulethela umphakathi. Ezinye zalezi zinzuzo zifaka:
Izinga lemibhalo yobufakazi: ukubaluleka kobufakazi manje obukhona manje ukuthi kuphenywe futhi kushushiswe, kwenziwe ngcono kakhulu okwenza kwaba lula kakhulu ukuqhubeka nakho. Lapho sekufakazelwe ngokwanele ukwakhiwa kwezinyawo bese kuboniswa, kuba lula kakhulu ukunquma ngala macala.
Ukucaciswa kwe-ejensi: ngokuvumela ngisho nomphakathi ukuba ufinyelele ebufakazini bevidiyo nokubhalwa phansi kwamagagasi, ubuhlobo phakathi komphakathi nebutho lamaphoyisa manje selunamandla kunangaphambili. Manje njengoba umphakathi ubona ukuthi leli phoyisa lisobala kangakanani futhi lizimisele ukubakhombisa konke okuphathelene necala, sekwakhe isimo sokuthembela kubo.
Izimo zokubhekana nesimo: abantu abaziqaphelayo bazakhela lapho sebebona ukuthi ziyaqoshwa kusize kakhulu ukuthuthukisa isimilo esihle kwabasebenza ezindlini zombili nakwezamaphoyisa. Wonke umuntu ufuna ukwenza kahle futhi enze kahle uma azi ukuthi ayaqoshwa, akwaziwa muntu ukuthi yiliphi izinga lokuphenya elingasetshenziselwa lona. Kuhle ngaso sonke isikhathi ukugwema ukungaziphathi kahle ukuze nje ugweme izinkinga kamuva.
Ukuhlonza nokulungisa izinkinga ze-ejensi yangaphakathi: ukusetshenziswa kwamakhaza omzimba kwenze kwaba lula ukukhipha amaqanda amabi emandleni, lokhu kubandakanya ikakhulukazi labo; basebenzise amandla abo ukucindezela, basebenzise umfaniswano wamaphoyisa ukuthola ama-freebies, basebenzise iyunifomu ye-felony noma inkohliso futhi basebenzise nebheji labo ukuthola ukufinyelela okungekho emthethweni ezindaweni okungafanele babe kuzo. Ukuba namakhamera omzimba kusiza ukunika zonke lezi zinto futhi kubekwe izijeziso ezifanele.
Ukuxazululwa kwezigameko ezithinta izikhulu kanye nezikhalazo eziphathelene nokusebenza: Kunezikhathi lapho kudonswa khona amacala ngamaphoyisa futhi kuba nzima ukwahlulela ukuthi ngubani okhuluma iqiniso. Ngomzimba we-cam, kuba lula ngempela ukuvikela ama-footuts angacashula noma yiliphi iqembu elibandakanyekayo. Ukuba nobufakazi obufana nalokhu kunganikeza amarekhodi anembe ngokwengeziwe womcimbi owenzekile.
Ukusebenza kwamaphoyisa: Ukusebenza kwamaphoyisa ngokuphelele kwenziwa ngcono kakhulu ngoba ukuziqonda ngokwanda kukhulu kakhulu ngakho-ke izikhulu zihlala ziziphethe kahle kakhulu ngakho-ke zikhuthaza ukuziphatha okuhle ngaso sonke isikhathi. Ukwenza ukuqeqeshwa kwesikhulu kanye nemithetho kuphumelele kakhulu futhi kube nzima kakhulu.
Ukucatshangelwa kwenqubomgomo nokuncoma
Kubalulekile ukuthi izinhlaka zithuthukise izinqubomgomo ezibhaliwe eziphelele ngaphambi kokusebenzisa uhlelo lwekhamera egqokwa ngumzimba. Ukuba nalezi zinqubomgomo kuqondise ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngumzimba kubaluleke kakhulu, izingqinamba zingavela ekuqalisweni kwe-cam cam enezinkinga eziningi ikakhulukazi izindaba zobumfihlo. Njengoba lezinqubomgomo zisatshalaliswa kufanele zichaze ngokwanele ukuhlinzeka ukuholwa okucacile kakhulu nokuvumelana kepha empeleni zivumela isikhala sezinguquko eziguqukayo njengoba uhlelo luvela. Ngesikhathi sokuthuthukiswa kwalezi zinqubomgomo, kubaluleke kakhulu ukuthi kube nesivumelwano sokuhlala phansi nabaphathi, abeluleki bezomthetho, izinyunyana zamaphoyisa, abashushisi, umphakathi kanye nabaphathi bangaphambili ngoba lokhu kubalulekile. Kungumsebenzi wama-ejensi ukwenza izinqubomgomo zitholakale emphakathini.
Kukhona izinto eziningi ezikhathazayo amakhamera agqokwa ngomzimba aphakamisa njengoba izinhlangano kufanele zinakekele njengoba zakha izinqubomgomo zazo. Eminye yemiphumela eminingi okufanele ibonwe ukuthi kubumfihlo nasebudlelwaneni bomphakathi, okulindelwe okwenziwe yizinkinga zekhamera eziphakanyiswe yizikhulu kulayini wokuqala womsebenzi futhi ekugcineni izindleko zalo zezimali. Lokhu okulandelayo izincomo ezisuselwa ocwaningweni lwe-PERF kanye nehhovisi lamaphoyisa. Ama-ejensi abamukelayo kufanele abalingane nezidingo zabo, izinsiza, izidingo zomthetho kanye nendlela yabo yefilosofi. Lezi zincomo yilezi:
Iziphathimandla kufanele zivunyelwe ukuthi zibuyekeze ama-video azwakalayo ngesigameko esibafaka ngaphambi kokukhuluma ngesigameko, iphoyisa elibuka kabusha i-footage livame ukusiza ukukhumbula kabusha kanye nemibhalo engcono neyolwazi ngokwengeziwe ngomcimbi owenzekile. Ukuqopha isikhathi sangempela kubhekwa njengobufakazi obuhle kakhulu njengoba okuqopha nakho kubonakala ngokushesha futhi kungathinti ukucindezelwa. Iningi lamaphoyisa asePERF ahleli ukunikeza lesi sincomo empeleni avumelana nezikhulu ezicela ukuthi zinikezwe imvume ebavumela ukuthi babuyekeze lezi zimo. Konke lokhu kuhamba ukuqinisekisa ubufakazi obungcono nangokucacile.
Izinqubomgomo kufanele zisho ubude besikhathi lapho idatha erekhodiwe ingagcinwa khona lapho uhlela ama-footage kungcono uma izikhulu zizihlukanisa ngohlobo lwemicimbi eziyiyo, le ngenye yezindlela ezinhle kakhulu zokuhlukanisa. Ngokuqondene nobude besikhathi imidwebo yobufakazi engagcinwa iyahlulelwa futhi inqunywe ngumthetho wombuso olawula leyo ndawo. Ngenkathi imininingwane engenabo ubufakazi i-ejensi kufanele ibheke isidingo sokugcina okuqoshiwe ukuze kuthuthukiswe ukubonakala kanye nokuphenya ngezikhalazo, iningi le-PERF livumile ukugcina idatha yezinsuku ezingama-60-90 ngaphambi kokuthi isuswe.
Iziphathimandla ezihluleka ukuqopha kwikhamera into edingwa yinqubomgomo yomnyango ukuqoshwa kumele zikhulume ngenkathi ziqoshwa ukuthi kungani zingazange ziqophe imicimbi ebaluleke kangaka, Lokhu kuyindlela ekwenzeni ukuthi izikhulu ziphendule ngezenzo zazo. Kuyasiza nabaphathi ukuphenya ngokungahambi kahle abasola ukuthi kungenzeka bekwenzeka nxazonke. Sekuyinto ejwayelekile kakhulu enkantolo manje, ukuthi ukuqoshwa kwevidiyo kumele kuthunyelwe yingakho kufakwa embhalweni isizathu sokungarekhodi ividiyo kungasiza ukususa ukukhathazeka ngokuthenjwa kwesikhulu okunjalo.
Iziphathimandla kulindeleke ukuthi zithole imvume kwizisulu zezehlakalo ngaphambi kokuqopha izingxoxo nazo, kuyisinyathelo esibaluleke kakhulu ukuthi izikhulu zicele imvume yokuqopha isisulu. Awukwazi nje ukuya kwesisulu uqale uphenye futhi ngenkathi wenza lokho kuqoshwa. Lokhu kungukungahambi kahle okungaletha amacala enkantolo, futhi kudwebe nezinkinga ezinkulu. Lokhu kufanele kugwenywe futhi nemvume kufanele njalo ithathwe.
Ngaphandle kokukhawulelwa okulinganiselwe, izikhulu kudingeka ukuthi zifake amakhamera wazo lapho ziphendula izingcingo zonke zenkonzo nangawo wonke umsebenzi wokuhlangana komthetho nayo yonke imisebenzi engenzeka ngenkathi iphoyisa lisemsebenzini, noma ngabe iyiphi inqubomgomo esetshenziswayo kufanele ichaze ukuthi yimiphi imisebenzi efakiwe ukuqoshwa kwe-cam cam, efana; Ukuboshwa, ukuseshwa kanye nokuphenywa. Noma nini lapho isikhulu singazi ukuthi siqopha noma cha, kungcono ukuqopha. Ingahlala isuswe ngokuhamba kwesikhathi, izinhlangano eziningi ziyazi ukuthi akunakwenzeka noma akuphephile ukurekhoda ezimweni ezithile kakhulu yingakho nje zibacela ukuba benze imibiko ngamafomethi ebhaliwe noma bangacelwa ukuba bakhulume ngekhamera. Le mibhalo ingasetshenziselwa ukuzisusa ukuze iguqulwe lapho zibizelwa ukuvikela isenzo sazo.
Izinqubomgomo ezenziwe kufanele zifake ukuphathwa kwedatha nokuthi yini engenziwa kuyo lapho nje umuntu esekutholile, kufanele kube nezinyathelo zokuvimbela ukuphazanyiswa kwedatha, ukususa noma ukuphinda kabili ukusebenzisa ngaphandle kokuqinisekiswa okufanele. Le mininingwane iyazwela futhi kufanele isingathwe noma kanjani futhi akufanele ifinyelelwe noma ngubani. Kubaluleke kakhulu ukuthi ubuqotho nokuvikeleka kwevidiyo kuvikelwe kahle. Amanye amasu angasetshenziswa ukuze kuqinisekiswe lokhu kufaka phakathi: ukusetshenziswa kwezinhlelo zokugcina imininingwane ezinemizila yangaphakathi yamabhuku ezimali, kucelwa abaphathi lapho belanda imininingwane eyenzekile lapho isikhulu esiceliwe sabandakanyeka khona futhi senziwa nocwaningo lwezinsolo ngezibuyekezo ezenziwe kulokhu. ukubonwa kwevidiyo.
Ama-ejensi kumele abe ne-protocol ethile okumele ihambisane futhi icace uma kukhulunywa ngokukhishwa kwama-footuts aqoshwe ngaphandle ngenkathi kudedelwa ama-video emphakathini noma kwabezindaba, inkampani kufanele ihambisane nomthetho wokuveza obala umphakathi wombuso. Kunconywe ukuthi inqubomgomo yokudalulwa okubanzi kumele yenziwe ukuze kuthuthukiswe isenzo esiphendulayo nesobala. Kodwa-ke, kubalulekile ukuthi izinhlaka zidingide izindaba zangasese ngaphambi kokuthatha isinqumo sokukhulula umphakathi. Iningi lalezinqubomgomo kufanele lifake phakathi ukuvikela ukufinyelela kwevidiyo okungagunyaziwe noma ngisho nokukhululwa.
Uhlelo lwekhamera egqokwa ngomzimba kuma-ejensi lukhula ngokushesha, izinqubomgomo nezinqubomgomo zidingeka ngokushesha ukuqondisa izinto ngendlela efanele.
Ukufeza Uhlelo lweKhamera Yomzimba-Worn kanye Namakilasi igcine ukuguqulwa: Disemba 3rd, 2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-4202 Ukubuka kwe-3 Namuhla